चलचित्र लाइनको जस्तो वैवाहिक जीवन होइन - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
चलचित्र लाइनको जस्तो वैवाहिक जीवन होइन (फ्रन्टपेज : पावरफूल लभ म्यारिज) । यो नवजोडीलाई हामीले सधैं खुसी देख्न पाऔं— शुभकामना ।
बाबु सुशील, प्रदीप थापा, सिर्जना ढकाल
यस्ता बकम्फुसे कुरालाई साप्ताहिकले स्थान दिएको कत्ति पनि मन परेन (गजुरियल : सीमा समस्या) । योभन्दा अरू नै कुरालाई प्राथमिकता दिएको भए हुन्थ्यो ।
दीपेन्द्र तामाङ, नवीन पराजुली, रुद्र भट्टराई, फुच्चे
बडो रमाइलो लाग्यो (पूजाको प्रश्न पल शाहको उत्तर) । पर्दामा यो जोडी जमेको छ ।
बधाई छ अन्जली लामालाई (अञ्जलीको दोस्रो खुड्किलो) । साहसपूर्वक अघि बढ ।
हिलोमा जान मन नपराउनेहरू त्यही हिलोबाट फलेको अन्नचाहिँ खान्छन् (वर्षा : उमंग, आशा र निराशा) । एकछिन हिलोमा खेल्न नहुने कस्तो बानी ?
यो नाटकले सफलता पाओस् (रंगमञ्च : एन्टिगोनी)— शुभकामना, तर नेपाली नाटकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।
हाम्रो देशमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा कोही ढिलो आउँदा कुरिरहनुपर्छ भन्ने छैन (समय सन्दर्भ : तस्बिरका रूप) । तोकिएको समयभन्दा एक घण्टा ढिलो सुरु हुने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यो संस्कार बसाउन सके सबै समयमै आइपुग्थे कि ?
यस्तो फेसन शोमा नेपाली पहिरनलाई बढीभन्दा बढी स्थान दिनुपर्छ (फाइबर टु फेसन) । हाम्रो परम्परा र वेशभूषालाई आधुनिकताले प्रभाव नपारोस् ।
फोटो फिचर रमाइलो लाग्यो (तस्बिर बोल्छ : रोमाञ्चक मड स्पोर्ट) । नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका खेल आयोजित गर्न सक्नुपर्छ पर्यटन विकासका लागि ।
यस्ता घटना डरलाग्दो रूपमा फैलँदै गएका छन् (अपराध : लेडिज ग्याङवार फेसबुकदेखि फाइटसम्म) । अभिभावकहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्तोमा स्वयं आफैं पनि सतर्क हुनुपर्छ ।
वर्षाका टिप्स मन परे (सौन्दर्य : वर्षामा सौन्दर्य कायम राख्न) । यस्तै समय, सान्दर्भिक टिप्सहरू निरन्तर पढ्न पाइयोस् ।
पहिलेभन्दा फरक गीतको अपेक्षा गरिएको छ (चर्चामा : दुई महिनाअघि नै तीजगीत) । एकदमै हल्का गीतको बाढी नै आयो । सुनौं–सुनौं लाग्ने गीतको भने अझै कमी देखिन्छ ।
गुरु भट्टराईलाई शुभकामना छ (गुरुको एल्बम सार्वजनिक) । तपाईंको गीतले चर्चा बटुलोस् ।
पुराना कलाकार केके कर्माचार्यका बारे जानकारी पाइयो (यात्रा सन्दर्भ : केकेको रंग संसार) । यो लेखबाट रंगसम्बन्धी ज्ञान समेत प्राप्त भयो । रंगसँग खेलिरहेका कर्माचार्य आम कलाकारभन्दा अनुभवि एवं प्रखर रहेछन् ।
बिकट क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर आकर्षित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ (शिक्षा : सिटिइभिटीका केही कोर्स) । सिटिइभिटीले अवसर नपाएका तथा राम्रो शिक्षाबाट बञ्चितहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जसले गर्दा स्वदेशमै काम प्राप्त गर्न सकियोस् ।
जुन व्यक्ति जुन क्षेत्रमा रमाउँछ, निरन्तरता दिन्छ, उसका लागी त्यही पेसा सुहाउँछ (गसिप : देखिएन फुर्ती) । कला क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति राजनितिमा सफल नहुन सक्छ । जो–कसैको फुर्तीफार्ती सधैं नचल्न सक्छ ।